होम डेलिभरी गर्दै हुनुहुन्छ? यस्ता छन् नयाँ मापदण्ड ! « Salleri Khabar
होम डेलिभरी गर्दै हुनुहुन्छ? यस्ता छन् नयाँ मापदण्ड !
प्रकाशित मिति :4September, 2020
१९ भदाै, कठमाडाैँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले घरदैलो (होम डेलिभरी) सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यससँगै आजदेखि घरदैलो सेवा समेत सञ्चालनमा आएको छ । सेवा सञ्चालन गर्दा तोकिएको मापदण्ड लागू नभएमा कडा कारवाही हुने प्रशासनले चेतावनी दिएको छ । घरदैलो सेवाको आजदेखि नै अनुगमन शुरुआत भइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जानकारी दिए ।
काठमाडौँमा भने सहायक प्रजिअ जीवनप्रसाद दुलालको नेतृत्वमा अनुगमन समिति रहेको छ । स्थानीय तहको वडाका प्रतिनिधिले समेत निगरानी राख्ने जनाइएको छ ।